uBlock, free na ibu ọzọ uzo ka adBlock Plus | Site na Linux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Aplicaciones, Na-atụ aro
1 Kedu ihe bụ uBlock?
2 UBlock arụmọrụ
3 Ntinye UBlock
Kedu ihe bụ uBlock?
uBlock Ọ bụghị naanị mgbasa ozi mgbasa ozi; ọ bụ izugbe nzube blocker. Ọ na-egbochi mgbasa ozi ka ọ na-akwado syntax Adblock Plus, mana ọ gbatịpụrụ syntax ahụ ma hazie ya iji rụọ ọrụ na nzacha omenala na iwu. Dị ka ndị okike ya si kwuo, ọ na-ahapụ CPU dị mfe na akara ncheta na, n'agbanyeghị nke a, ọ nwere ike ịkwanye ma mezuo ọtụtụ puku nzacha nke ndị na-egbochi ndị ọzọ na-ewu ewu, dị ka AdBlock Plus (ABP) ma ọ bụ Ghostery. Ndepụta ndị a gụnyere EasyList, EasyPrivacy, Malware Domains, na ndị ọzọ na-enye gị ohere igbochi ndị na-eso ụzọ, wijetị mmekọrịta, na ọtụtụ ndị ọzọ. Ọ na-ewetara nkwado maka faịlụ ndị ọbịa ma na-enye gị ohere itinye isi mmalite ndị ọzọ, na mgbakwunye na ndị na-abịa "site na ụlọ ọrụ mmepụta ihe".
uBlock na-arụ ọrụ na ma Chromium / Chrome na Firefox na, n'adịghị Ghostery, kesara iji Akwụkwọ ikike GPLv3, na-eme ka ọ bụrụ ngwá ọrụ maka software n'efu. Ọ bụ ezie na Ghostery na-arụ ọrụ nke ọma, ọ bụghị naanị na ọ bụghị sọftụwia na - akwụghị ụgwọ mana enwere akwa enyo na site na ọrụ "GhostRank" ọ na-ere data na mgbasa ozi egbochiri na ụlọ ọrụ mgbasa ozi n'onwe ha. Kama, ana m akwado ka ịnwale ndị ọzọ n'efu, dị ka Kwupu o uBlock. Isi ihe ọzọ ị ga-eburu n'uche bụ na uBlock - yana ABP, AdGuard, na ụfọdụ ndị ọzọ- na-enye ndị ọrụ ohere ịbanye nzacha nke ha, ihe na-agaghị ekwe omume na Ghostery ma ọ bụ Kwụpụ.
Na ahụmịhe m, ebe ọ bụ na ị na-eji uBlock, ọsọ nchọgharị ewepụtawo ihe dị ịtụnanya. Ọzọkwa, ibe weebụ dị "ọcha" ma na-enweghị ọdịnaya dị oke mkpa iji dọpụ uche m. Dị ka a ga - asị na nke a ezughi, n'adịghị ka Adblock Plus (ABP), uBlock na - eji obere akụ. Ndị a bụ ụfọdụ chaatị eserese iji gosipụta ya.
Nkọwa nyocha nke oriri nchekwa na Chromium
Nkọwa nyocha nke oriri nchekwa na Firefox
Naanị n'ihi na uBlock dị agile na ịrụ ọrụ nke ọma apụtaghị na igbochi obere trackers.
N’uche nke m, isi okwu a chọrọ ịdọ aka na ntị dị nkenke. uBlock anaghị egbochi ndabara ụfọdụ wijetị nke Facebook, Twitter, Google+, wdg. na ndọtị ndị ọzọ na-egbochi. Iji mee nke a, ịkwesịrị ịgbalite ụfọdụ nzacha ndị ọzọ (nke dị ugbu a na uBlock), dịka Anti-ThirdpartySocial ma ọ bụ Fanboy's Social Blocking List. Ka o sina dị, ị ga-egwuri egwu na ndepụta ahụ ruo mgbe ịchọtara nguzozi achọrọ. Nhọrọ ọzọ, ntakịrị ihe mgbagwoju anya, bụ iji mee ka nhọrọ dị elu na ịtọ ike nyo iwu.
Ntinye dị mfe, ị ga-etinye mgbakwunye nke dabara na ihe nchọgharị weebụ ị na-eji.
Budata uBlock ndọtị maka Firefox
Budata uBlock ndọtị maka Chromium / Chrome
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » uBlock, free na ibu fechaa ọzọ na adBlock Plus
Daalụ nke ukwuu, m ga-anwale ya. Firefox m na adị nwayọ nwayọ.
Anọ m na-eji ya kemgbe ọ malitere na Firefox, ọ na-erepịaghị ihe ọ bụla ma ọ na-arụ ọrụ nke ọma.
I nwere ike iso mmepe nke mbụ edemede na ndụdụ o mere:
uBlock Mmalite, ndọtị na Firefox: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/ublock-origin/
Nwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ banyere ndụdụ ahụ, n'etiti nyocha nke mgbakwunye abụọ ahụ, yana na wikipedia:
Ọ ga-adị mma ugbua, mana kedu ka a ga-esi jiri arụmọrụ a tụnyere ndị ọbịa ma dezie / wdg / ụsụụ ndị agha? Ederede a dị mma, ọ bụ ezie na ọ naghị ewepu iframes mgbasa ozi, na-eme ka njehie 404 wee kaa akara.
@jorgicio Ejiri m ihe ngwọta dị ka nke ị na-ekwu, ihe gbanwere / wdg / ụsụụ ndị agha yana userContent.css iji zere iframes na akara ọ bụla nke mgbasa ozi egbochiri na ibe. N'ezie ịme ihe dịka nke a na-eme ka arụmọrụ Firefox ka mma. N'ebe a na FromLinux deputa ihe ozo di nma nke oma, dika odi https://blog.desdelinux.net/privoxy-adblock-list-y-adios-publicidad/ o gosikwara ole arụmọrụ Firefox dị mma n'okpuru nhazi ahụ, dị ezigbo nso na nke userContent.css na / wdg / ụsụụ ndị agha.
Mana enwere m ike ịgwa gị n'eziokwu na uBlock dị ezigbo mma, enwere m taabụ 21 ugbu a na Firefox, consoles atọ, vim na geany mepere yana oriri 681 Mb nke Ram, adịghị njọ n'ezie.
Na m jisiri ike hụ, ma nwee ekele. Olileanya ọ dị maka ihe nchọgharị ndị ọzọ, dị ka Opera 😀
Maka ugbu a, a ga m esoro ublock lee ka o si aga 😀
M na-aza onwe m: Ee enwere xD
Onyinye magburu onwe ya @usemoslinux, site na obere nhọrọ ama ama. O meela ogologo oge kemgbe m kwụsịrị iji ABP na-akwado ederede iji gbanwee / wdg / ụsụụ ndị agha site na iji usoro nke ezigbo ndepụta, yana onye gbanwere ọrụContent.css iji kpochapụ ebe iwe na-ewe iwe. Na nke a, ụfọdụ mgbasa ozi na-agbapụ, mana mmelite na arụmọrụ Firefox bụ ihe ịtụnanya.
Mgbe ahụ achọpụtara m ndọtị a ka m na-emezi edemede maka / wdg / ụsụụ ndị agha, ekpebiri m ịnwale ya na m ga-asị na ọ tụrụ m n'anya nke ukwuu, ọ na-akwado otu ọkwa arụmọrụ dịka userContent.css ma melite mgbasa ozi na-egbochi ọtụtụ, yana ịdị mfe ịgbanwe whitelist ma ọ bụ tinye ihe ọhụrụ, dị nnọọ mma.
Ekwesiri ime ka o doo anya na enwere "uBlocks" abuo. Nke ahụ ha nyere njikọ na ndetu ahụ bụ nke m na-eji, "Origin" nke bụ ịga n'ihu nke onye nrụpụta mbụ na ọrụ ya, mgbe enyefechara n'aka onye nrụpụta ọrụ ọzọ nke ilekọta ngalaba nke ọrụ uBlock.
Enwere ọtụtụ ihe dị iche iche ebe ahụ, n'ihi na n'aka nke onye nrụpụta mbụ were ndụdụ nke ọrụ nke aka ya wee melite ya ma debe ya nke ọma. Ndị mmepe ndị ọzọ batara n'ọtụtụ esemokwu n'okwu dị iche iche, ha wee bụrụ ndị ndị ọrụ na-achọghị ịma na-amasị ha.
Na nkenke, kpachara anya mgbe ha na-ahọrọ. uBlock Origin bụ nke ha kwesịrị iji, dị ka akwadoro na ndetu. Ana m eji ya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ site na ụbọchị ndụdụ ahụ pụta na enweghị nsogbu.
Na mgbakwunye, m na-eji Badger Nzuzo iji zere nsuso na nsuso nke Ghostery ji nye m, nke m kwụsịrị iji maka otu ihe ndị ahụ edepụtara na ndetu ahụ.
Na ihe edeturu na chrome bu mbido, ma Firefox bu xD nke ozo
nke ahụ bụ mbido maka firefox.
Daalụ maka nkọwa. Dika m kwuru na nkowa ozo, n’oge edere ihe ederede amaghi m na odidi nke ublock na ublock sitere na ya dika oru di iche. N'ọnọdụ ọ bụla, ugbu a njikọ niile dị n'isiokwu a na-arụtụ aka na mbido mbido uBlock, nke bụ nke onye edemede mbụ na-akwado ugbu a.
N'aka nke m, mgbasa ozi ahụ adịghị mkpa, mana nsuso na-enye m nsogbu. Nwere ike ikwu iji Badger Nzuzo yana Kwupu? Ma ọ bụ ihe ọzọ?
Zaghachi na staymetalmixer
Ndewo, m na-eji Badger nzuzo ma enwere m mmasị n'ụzọ ọ na-arụ iji gbochie nsuso.
Dị ka ekwuru, Ghostery abụghị ihe na-emeghe ma enwere ọtụtụ enyo na ọ na-egbochi mgbe ọ na-ezipụ ụlọ ọrụ data.
N'ihe banyere Ikwupu, ejiri m ya nwa oge ma ọ rụọ ọrụ yiri Ghostery. Have nwere ndepụta trackers na ọ na-egbochi ma na-emelite. Amaghị m na ọ bụ oghe ma ọ bụ na ọ bụ, ma akwụsịrị m iji ya n'ihi na ọ meghị ka m kwenye na Ghostery rụzuru nke ọma.
Ugbu a, ebe m chọrọ ihe Mepee, achọgharịrị m ma chọta Nzuzo Nzuzo. M dokwuo anya na ọ na-arụ ọrụ dị iche na nke 2 gara aga. Site na ndabara ọ naghị egbochi ma ọ na-amụta ka ị na-eji ya ma na-agagharị, nke ndị na-eso ụzọ bụ ndị igbochi ma ọ bụ.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị karịa iji (maka ihe nchekwa na ị gaghị eme egwuregwu abụọ n'azụ) Open Open, Nzuzo nzuzo kwesịrị ịbụ otu n'ime nhọrọ kacha mma. Jiri ya naanị, yana Disconnect na Ghostery na-eme otu ihe ahụ.
Mgbe niile na-arụ ọrụ post, daalụ Pablo.
Ọ ka mma arụmọrụ m na Firefox ugboro abụọ.
E wezụga nke ahụ, faịlụ nnabata na winXP na linux yiri nke ahụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu
Have nwere ya emelitere ebe a: http://winhelp2002.mvps.org/hosts.htm
Na ntuziaka maka Windows na Linux, ha adịghị mkpa mana ka ọ ghara inwe obi abụọ.
Paul Zuniga dijo
Daalụ maka ozi ahụ. Naanị m na-egbochi adblock ma ugbu a enwere m ihe ijuanya a. Ọ na-arụ ọrụ 100% na safari.
Zaghachi Paulo Zúñiga
wow, daalụ nke ukwuu maka ịkwado mgbakwunye a.
Na kọmputa m ka m na-eji ABE, mana mgbe nhọrọ Firefox Dev si nweta ọtụtụ usoro wee pụta, ọ kwụsịrị ịrụ ọrụ ya mere m ji họrọ ịkwụsị iji ọtụtụ usoro ... mana nke a yiri ka ọ na-arụ ọrụ nke ọma ... 🙂
M na-eji Adblock Plus ogologo oge.
Awụnyela m uBlock Origin ma ọ dị ka ọ ga - eme ka ọ dịkwuo mma, ọkachasị na laptọọpụ m, nke bụ afọ. N’ime nri abalị, anaghị m ahụ ọtụtụ ihe.
Ihe m nwere bu ihe nke ọgbaghara nwere otutu aha yiri uBlock, uBlock Origin, µBlock ...
Etinyewo m uBlock Origin, mana nke bụ eziokwu bụ na amaghị m nke ọ ga-aka arụnyere.
Agụọla m na okwu ndị Sergio S na-atụ aro uBlock Origin, mana agụkwara m saịtị ebe ha na-akwado µBlock na uBlock, ọbụlagodi na ederede mgbagwoju anya na-ekwu maka otu ihe na itinye njikọ na nke ọzọ, n'eziokwu, otu post a jikọtara gị uBlock na Firefox na uBlock Mmalite maka Chrome.
M, ewezuga ịdekọ ọgba aghara ahụ, amaghị m ihe aha ndị a dịgasị iche iche na-aga, mana ọ bụrụ na mmadụ nwere ike itinye obere iwu ma kọwaa nke a ntakịrị, m ga-enwe ekele maka ya.
Daalụ, n'ọnọdụ ọ bụla.
Eziokwu bụ na n'oge edere isiokwu a, amaghị m na ịdị adị nke uBlock na uBlock sitere. N'ọnọdụ ọ bụla, iji bụrụ onye na-agbanwe agbanwe, naanị m edozi njikọ ndị ahụ ka ha niile rụtụ aka na mbido uBlock.
Ọ dị ezigbo mma, n'ọnọdụ m achọghị m ọtụtụ ọrụ yana m na-eji Bluehell ọ na-arụ ọrụ nke ọma maka m.
Ebe m huru ublock di na Firefox agam eji ya. Ọ bụ ozi ọma ịmara nke ahụ. Site n'uzo m si eziga ABE ka m fee elu ebe o na enye m agwa iwe ebe onwunye ihe ufodu na anaghi enye m ikike, tumadi nke a hu na laptọọpụ enyi m nwanyị. Na m arụnyere na ya na-eche na ọ ka mma
Ọfọn, ekele maka ndetu. M hụrụ ya n'anya n'ezie 🙂
A post na-akọwa nhazi kachasị mma ga-adị mma, nke mere na ndọtị ahụ nwere ọrụ niile nke Adblock na Ghostery. E wezụga nke ahụ, achọrọ m ịjụ ma ọ bụrụ na onye ọ bụla maara DoNotTrackMe ugbu a na-akpọ blur na gịnị ka ị chere, ọ bụrụ na ọ nwere ntụkwasị obi?
Aga m anwale ya kama Adbloc na kọmpụta nke mụ na Xubuntu nwere naanị 1 Mb nke ebe nchekwa. M na-eji Firefox ma oge ụfọdụ ọ na-ada nwayọ nwayọ ma na-adaa n'ihi na, n'oge a, ụfọdụ web peeji tinye ọtụtụ ederede na enweghị ụzọ ịnyagharịa.
Olee otú ihe ọma na ad blockers adị, mgbe ụfọdụ naanị na mgbasa ozi na ọ dịghị ọdịnaya e kwajuru 🙁
ER KUNFÚ NKE TRIANA dijo
Ọ naghị egbochi mgbasa ozi niile, ọbụlagodi na akwụkwọ ozi yahoo. Ọ bụrụ n’inwe ozi yahoo, tinye igbe mbata gị ma chọpụta na n’elu ozi izizi anatara, enwere igbe nke, site n’oge ruo n’oge, mgbasa ozi na-egosi. Enweela m ihe nzacha na otu puku ụzọ na igbe nwere mgbasa ozi obi ụtọ na-aga n'ihu na-apụta site n'oge ruo n'oge, ọbụlagodi amaghị m otu esi ewepụ ya.
Zaghachi ER KUNFÚ DE TRIANA
ublock na-arụ ọrụ dị ukwuu na chroium LMDE betsy
Ọ dị mma, daalụ maka ịkekọrịta
Zaghachi ka nyoroxuggk
Ana m akọrọ gị maka nsogbu dapụtara. M na-eji ad igbochi ngwaọrụ, ugbu a adblockanọwo ogologo oge ma ọ ju m anya na ka oge na-aga, ha anaghị abawanye uru. Ihe ezi uche dị na ya ga-abụ nke ọzọ, na ha zuru oke mgbe ha na-egbochi ọdịnaya mgbasa ozi mana ọtụtụ weebụsaịtị nwere ebee, ị nwere onye mgbochi gị, ma ọ bụ ị na-eri mgbasa ozi ma ọ bụ na ha na-amanye gị ịbugharị ibe ahụ site na deactivating ya n'ihi na ọ na-achọpụta mgbochi. Achọrọ m ịjụ ma ọ bụrụ na ịmara maka ngwa ọ bụla bara uru n'ezie taa igbochi mgbasa ozi. Daalụ!
Zaghachi Alfredo Bohórquez